Company Profile - Zhejiang filoha Filtration Teknolojia Co., Ltd.
Mihodina amin'ny sivana Fuel
Mihodina amin'ny sivana Oil
Filter solika Elements
Air Conditioning sivana
Filter hafa Parts
Zhejiang filoha Filtration Teknolojia Co., Ltd.
(Previous araka ny Zhejiang Rongsun Filter Co., Ltd.), dia naorina tao amin'ny faritanin'i Guangdong tamin'ny 1999, izao Faritany Jiaxing tanàna, dia iray amin'ireo mpitarika ao amin'ny orinasa adidy mavesatra-fiara sivana orinasa. Amin'ny voasoratra renivohitra ny 30 tapitrisa RMB, 31 arivo amby iray alina metatra toradroa ary mihoatra ny atrikasa mpiasa 200, filoha manana 10 tapitrisa isan-taona ny famokarana fahaiza ny sivana isan-karazany.
Amin'ny alalan'ny 20 taona fanavaozana sy ny fampandrosoana, filoha efa nivoatra mihoatra ny 1000 karazana vokatra, nanarona fanorenana milina, mavesatra-adidy kamiao, lafo vidy fiara fitateram-bahoaka, sambo, solika mpamokatra milentika, rivotra compressors, fahefana zavamaniry, fiarovana ny tontolo iainana, fanadiovana, sy ny maro hafa mifandraika faritra ny orinasa. Tompon'ny maro ihany koa ny orinasa maro eran-malaza mpanamboatra 'OEM mifandraika asa, Ampio Izy Hanana fifandraisana ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny maro fanta-daza orinasa, ao anatin'izany ny Doosan Group, Páll Corporation. Ankehitriny, filoha efa nahazo ISO9001, IATF16949: 2016 toetra rafitra fitantanana taratasy fanamarinana, ISO 14000 fitantanana ny tontolo iainana taratasy fanamarinana, nefa isan'ny ny talen'ny fikambanana ao amin'ny Shinoa anaty setroka maotera fikambanana sivana komity, ary ny mpikambana ao amin'ny China Teknolojia Market Association Filtration sy Fisarahan-toerana Society.
Mbola mihoatra noho ny orinasa dia ny filoha ny asa fitoriana. Tianay ny hiara-miasa amim-pahatsorana aminao ny mamorona eran-marika sy hoavy tsara kokoa miaraka!
Fanaraha-maso tanteraka, hatrany Improvement, foana zava-baovao, Customer Satisfaction
Hanaraka ny ara-teknika famaritana ny IATF16949: 2016 ho hentitra hampihatra ny rafitra fitantanana tsara mba hahazoana antoka ny vokatra izay mahafeno ny mpanjifa ny fepetra.
amin'ny alalan'ny fanofanana, tari-dalana sy ny fitrandrahana ny mety ho ny mpiasa, mba hampiroborobo ny orinasa mba hanatsarana hatrany fahombiazana, fampihenana ny vidiny, ka mitoera fampandrosoana maharitra.
Fanavaozana sy ny mpanjifa tsy tapaka MAHAFA-PO:
Fampandrosoana hatrany modely vaovao mba hahazoana vokatra tsara mihoatra mpanjifa fanantenana sy fahafaham-po kokoa mpanjifa.
100 Micron Fuel Filter Singa , Engine Fuel Filter singa Price , Fuel Filter singa , Filter solika Elements, Inline Fuel Filter Elements , C0506 Fuel Filter singa ,